Kashifaad:- Shirkadda Somtel oo Koofurta Somalia ka joojisay adeega Internet –Amarkii Alshabaab ? « AYAAMO TV
Kashifaad:- Shirkadda Somtel oo Koofurta Somalia ka joojisay adeega Internet –Amarkii Alshabaab ?
1254 Views Date February 3rd, 2014 time 5:13 pm
Shirkadda Somtel oo Koofurta Somalia ka joojisay adeega Internet –Amarkii Alshabaab ? Shirkadda Isgaarsiinta Somtel ee Dahabshiil Group ayaa maanta si rasmiya u joojisay adeegii Internetka ee Koofurta Somalia ,sida ay xaqiijiyeen macaamiisha iyo hoowlwadeenada Shirkadaas .
Joojinta adeega Internet-ka Somtel ku dhiiratay ayaa ka dhigan inay qaateen amarkii Al-Shabaab ee lagu faray Shirkadaha Isgaarsiinta inay joojiyaan Isticmaalka Internet-ka. Hormuud http://premier-pharmacy.com/product-category/pain-relief/ Telecom ayaa guud ahaan qaadacday amarka Al-Shabaab ,waxaana laga xiray Xaruntii Jilib ay ku laheyd Shirkada Hormuud.
Somtel inay qaadato amarka Al-Shabaab waxay u horseedi kartaa halis weyn oo Qatar Caalamiya gelin karto hasse yeeshee Dowladda Somalia wali wax wara kama soo saarin. Dhinaca kale,Somtel ma joojin adeegii Internetka ee Somaliland sida ay xaqiijiyeen Wariyeyaasha ka hoowlgala Hargeysa.